Kuputika Simba Tester Factory - China Inoputika Simba Tester Vagadziri, Vatengesi
Iyo DRK108 yemagetsi tear tester chishandiso chakakosha chekusimbisa simba rekubvarura.Ichi chiridzwa chinonyanya kushandiswa pakusarudza kubvarura bepa, uye zvakare inogona kushandiswa kubvarura yakaderera-simba kadhibhodhi.
DRK108A Pepa Tearness Tester chishandiso chakakosha chekusimbisa simba rekubvarura.Ichi chiridzwa chinonyanya kushandiswa kugadzirisa kuputika kwepepa, uye chinogona kushandiswawo kugadzirisa kubvarura kwekadhibhodhi rezasi-simba.
DRK109ST Pneumatic Double-head Burst Tester chiridzwa chepasi rose cherudzi rweMullen chinova chiridzwa chakakosha chekuyedza kuita kwesimba kwebepa nekadhibhodhi.Ichi chiridzwa chiri nyore kushandisa, chakavimbika mukuita, uye chepamberi mune tekinoroji.
DRK109 Kadhibhodhi Burst Tester Computer
Iyo DRK109 paperboard bursting tester isiri yepasirese yerudzi rweMullen chiridzwa chinova chiridzwa chekutanga chekuyedza kuita kwesimba kwebepa nebepa.Ichi chiridzwa chiri nyore kushandisa, chakavimbika mukuita, uye chepamberi mune tekinoroji.
DRK109C Kubata Screen Smart Cardboard Burst Tester
DRK109 Bata Screen Smart Kadhibhodhi Bursting Tester chishandiso chepasi rose cheMullen mhando chiridzwa chinova chiridzwa chekuyedza kushanda kwesimba kwebepa nemakadhibhodi.Ichi chiridzwa chiri nyore kushandisa, chakavimbika mukuita, uye chepamberi mune tekinoroji.
Iyo DRK109CQ Pneumatic Intelligent Burst Tester chiridzwa chepasi rose cherudzi rweMullen uye chiridzwa chakakosha chekuyedza kusimba nekushanda kwebepa nekadhibhodhi.